Pontus Marine Oo Cayintay Wakhtiga Ay Bixinayso Shahaadooyinka Lahaanshaha Saamiyada Shirkada – Geeska Afrika Newspaper | Hargeisa, Somaliland
Pontus Marine Oo Cayintay Wakhtiga Ay Bixinayso Shahaadooyinka Lahaanshaha Saamiyada Shirkada
Hargeysa(Geeska)-Shirkadda Pontus Marine ayaa sheegtay in marxaladii saddexaad ee hawsha culus ee ay ku jirtay ay gabo-gabo marayso, waxaanay cadeeyeen inay dhawaan bixin doonaan sh ahaadooyinka cadaynaya lahaanshaha saamiyada dadkii lacagaha maalgashiga ah ku darsaday.
Warsaxaafadeed uu ku saxeexanyahay maareeyaha shirkaddan Mr. Axmed Abokor A Maxamuud, ayaa u dhignaa sidan: “Sida aad ka warqabtaan waxay shirkadda Pontus Marine ltd ku jirtay hawl baaxad wayn.
Waxaa xusid mudan in qorshihii marxaladii labaad ay soo gaba gaboobayso 31/3/2014. Waa fursad u baahan inaanay ku dhaafin.
Nuxurka warsaxaafadeedkani waa in loo sheego mulkiilayaasha shirkaddan oo ah dadkii maalgashaday in bixinta shahaadooyinkoodii ahaa lahaanshaha saamiyada (share certificates) ay ku jirto gabagabo. Qorshuhu waa in la bilaabo bixinta shahaadooyinkaas 1/4/2014 insha Allah.
Bixinta shahaadooyinku waxay u soo kala horaynay oo loo bixinayaa siidii ay u soo kala horeeyeen dadka maalgashaday shirkadda, iyadoo sidaa lagu wadi doono ilaa qof wal oo saami gashaday uu hello shahaadadadiisii (Insha Allah) taas oo ka soo baxaysa xafiiska guud ee shirkadu ku leedahay wadanka Boqortooyada Ingiriiska.
Waxaanu fursadan uga faa’iidaysanaynaa inaanu xasuusino bahawaynta Soomaaliyeed meel kasta oo ay addunyadda ka joogaan inay soo maalgashadaan shirkaddan Pontus Marine oo ay fiiro gaar ah siyaan waqtiga gaaban ee ka hadhay inta maalgashiga saamiyadu sii furnaan doono.
Sidoo kale waxa lagu war gelinayaa bulshada inay hada ay ka helikaraan bogga shirkadu ku leedahay internetka www.pontusmarine.com,macluumaad afka soomaliga ku qoran,kaas oo xambaarsan dhamaan waxyaabaha aad uga baahan tahay xogta shirkadda.